Hazard Oo Ka Qoomameynaya Inuu Ka Tago Chelsea.
HomeHoryaalka IngiriiskaHazard oo ka qoomameynaya inuu ka tago chelsea.
February 5, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
In kasta oo ay jiraan dhibaatooyinka caafimaad ee kubad sameeyaha Real madrid hazard waxaa laga yaabaa inuu ku laabto kooxdii hore ee chelsea kadib dhibaatooyin dhaawac oo ku hareeyey Los blancos.
Real Madrid ayaa ku fashilantay Eden Hazard kaasoo lagu soo qaaday lacago badan laakin dhaawac Saaxib la noqday kaasoo xiiso u leh kooxdiisii hore ee Chelsea ku dhawaad kalabar lacagta bilowga ah ee ah 88 milyan ginni ayaa lagu soo iibsaday ciyaaryahanka sannadka 2019 sida ay qortay DefensaCentral.
Taasi waxay imaan doontaa ka dib markii Blues ay heshay da ‘yarada Timo Werner iyo Kai Havertz xagaagii hore qarash isku darka ah oo gaarayey £ 117.5 milyan ($ 150m)